သင်တို့ မေးထားတာတွေ ပို့စ်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်.. For မေးသူများ&မသိသေးသော သူများအတွက်.. - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Tutorials သင်တို့ မေးထားတာတွေ ပို့စ်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်.. For မေးသူများ&မသိသေးသော သူများအတွက်..
သင်တို့ မေးထားတာတွေ ပို့စ်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်.. For မေးသူများ&မသိသေးသော သူများအတွက်..
Thiha Htike at 9:49:00 PM Mobile Tutorials,
အမည်တမ်း သူ့ကြောင့်ဒုတ်ကောက်ကိုင်နေရတဲ့ Font ထည့်တဲ့ပြသနာ..
ဒါလေးက ရွှေမူန်ရတီထည့်တဲ့နည်း :P
မြန်မာ Font ထည့်နည်းကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမယ့်နှစ်နည်းထဲမှာ တစ်နည်းက Safe ဖြစ်/ လွယ်ကူပြီး နောက်တစ်နည်းကတော့ နည်းနည်းခက်ပြီး ဖုန်းတစ်ချို့ နဲ့ လဲ Compatible မဖြစ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့် ဖုန်းအားလုံးနည်းပါးဟာ မြန်မာဖောင့် ထည့်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် Root လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေမှရပါတယ် ...ကဲ .. Safe ဖြစ်တဲ့ ပထမနည်းကတော့
ဒါကို Download အရင်လုပ်ပါ
ပြီးရင် အဲဒီ့ apk တွေအားလုံးကို ဖုန်းထဲကိုထည့်ပါ .. al...
low non-market application ကို on ပေးပါ ။ပြီးရင် Zawgyi One TTF-2.apk ဆိုတာကို အရင် install လုပ်ပါ. ထပ်ပြီးတော့ FontChanger.apk ကို install လုပ်ပါ (root လိုပါတယ်) ။ ပြီးရင်တော့ Font changer ကိုဖွင့်ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်ပြောင်းရန် ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။reboot ကျပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာ ဖောင့်တွေကို မြင်နေရပါပြီ ။ ရိုက်ဖို့ Keyboard တော့လိုနေပါသေးတယ် ကျွန်တော့်ထဲမှာ frozen keyboard နဲ့ Myandroid နှစ်မျိုးပါပါတယ် ။ကြိုက်တာကို install လုပ်လိုက်ပါ နှစ်မျိုးလုံးလုပ်လဲရပါတယ်။ frozen keyboard ကတော လူကြိုက်များပါတယ် .. install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် setting ထဲက language and Keyboard ထဲက frozenkeyboard တို့ myandroid တို့ ဘေးက အမှန်ခြစ်လေးကို ခြစ်ပေးပြီး OK လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ စာရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ ခဏဖိထားရင် select input method ဆိုတာပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ သူတို့ ကို ရွေးပြီး မြန်မာလို ရိုက်လို့ ရပါပြီ ......
ပြီးရင် အဲဒီ့ apk တွေအားလုံးကို ဖုန်းထဲကိုထည့်ပါ .. allow non-market application ကို on ပေးပါ ။ပထမနည်းနဲ့ ကွာသွားတာကတော့ သူက ဖောင့်ကို change တာမဟုတ်ပဲ ဖုန်းထဲမှာ original ပါလာတဲ့ ဖောင့်နေရာ မှာ replace လုပ်တဲ့သဘောတရားမှာပါ။ ပထမဆုံး root explorer ကို install လုပ်ပါ။ပြီးရင် သူ့ ထဲကနေ စောစောကသွင်းထားတဲ့ DroidSans ကိုရှာပြီး copy လုပ်ပါ ပြီးရင် back နဲ့ / ပေါ်လာတဲ့နေရာအထိရောက်အောင်သွားပါ ။ရောက်ပြီဆိုရင် System ထဲကိုဝင်ပါ၊ ပြီးရင် font folder ထဲကိုထပ်ဝင်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အပေါ်က Status bar ရဲ့ အောက်မှာ Mount R/O လို့ ပေါ်နေရင် အဲဒါကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ။Read/only ဆိုရင် paste လုပ်လို့ မရပါဘူး။ R/W ဆိုတာပေါ်နေမှ paste လုပ်လို့ ရမှာပါ၊ Overwrite လုပ်မှာလားဆိုတာမေးပါလိမ့်မယ် Yes နှိပ်ပါ .... ဒါဆိုရင် reboot ချပြီးတာနဲ့ မြန်မာဖောင့်ရပါပြီ .... Myanmar Keyboard သွင်းနည်းကတော့ အပေါ်က အတိုင်းပါပဲ .
အခုဒီတစ်ခါထပ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ပို့(စ်)လေးကတော့ Font Changer Lite.apk File လေးကိုအသုံးပြုပြီး Android OS Device မှာ Myanmar Font ထည့်နည်းလေးပါ။Android OS Device တွေမှာ Setting Programs ထဲမှာ Font Style မပါရှိပါက Root လုပ်ပြီးမှသာ မြန်မာစလုံးလေးတွေ ပေါ်နိုင်အောင် Modify လုပ်ရမှာပါ။ လုပ်နည်းကတော့အရမ်း လွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မိမိ၏ Device ကိုတော့ Root လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာပါ။ Android OS Device ကို Root လုပ်နည်းကိုတော့ Youtube Video နှင့် အခြား Website တော်တော်များများမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မိမိ၏ Device Modle အပြည့်အစုံဖော်ပြပေးပြီး Comment Box မှာ မေးနိုင်ပါတယ်။ Android OS Device မှာ Myanmar Font ထည့်သွင်းနည်းကို ပို့(စ်) ၃ခုလောက်တင်ပေးပြီးပါပြီး။ (၁)Android OS Device မှာ Myanmar Font ထည့်သွင်းနည်း (၂) Androin Device မှာ မြန်မာစလုံးတွေ ကြည့်လို့ရအောင် ပြုပြင်နည်း ပို့(စ်)မှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ File တွေကို အရင်ဆုံး Download ယူပါ။ ApK File ကို Install လုပ်နည်းမသိသေးသူက ဒီပို့(စ်)လေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Font Changer Lite.apk
(၁)Font Changer Lite Folder ထဲ ကို Zawgyi_MrThangMing.ttf File ထည့်ပါ။
၁။ Device ကို Computer ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍ ထည့်နည်း၊ မသိသေးတဲ့ သူက ဒီပို့(စ်)လေးမှာ အပြည့်စုံလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံအတိုင်း My Computer ထဲတွင် ၀င်ပါ။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်မှ ပုံအတိုင်း မိမိ၏ Sdcard(Removablr Disk(F:) ထဲသို့ဝင်ပါ။ အောက်ပုံ ကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်မှ ပုံအတိုင်း Font Changer Folder ကိုဖွင့်ပြီး မိမိ Download ထားတဲ့ Zawgyi_MrThangMing.ttf File ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
၂။ OS Device ထဲကနဲ့ Root Explorer.apk ကိုသုံးပြီး ထည့်နည်း၊ Root Explorer.apk File ကို ဒီပို့(စ်)လေးမှာ download နိုင်ပါတယ်။
ပထမပုံတိုင်း root explorer ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယ ပုံအတိုင်း mnt Foldre ထဲတွင်ဝင်ပါ။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
ပထမပုံတိုင်း Sdcard ထဲဝင်ပါ။ ဒုတိယပုံ အတိုင်း မိမိ Download ထားတဲ့ Zawgyi_MrThangMing.ttf File ရှာပါ။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
ပထမပုံတိုင်း Zawgyi_MrThangMing.ttf File ကို ၃စက္ကန့်လောက်ဖိထားပြီး ပေါ်လာသော Box မှ Copy ကိုနိုပ်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယပုံအတိုင်း Fontchanger Foldre ကိုရှာပါ။ တွေ့ရင် Fontchanger Foldre ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
Fontchanger Foldre ထဲတွင် စေစေက Copy ထားတဲ့ Zawgyi_MrThangMing.ttf File ကို Past လိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီး>>>>>>
(၂)Font Changer Lite.apk ကိုသုံးပြီး OS Device Myanmar Font ပြောင်းနည်း/ထည့်နည်း
ပထမ ပုံအတိုင်း Font Changer....ကိုဖွင့်ပါ။ Device ကို Root လုပ်ပြီးသာဆိုရင် Allow လုပ်ဖို့လာပါလိမ့်မယ်။ Allow Button လေးကို နိုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Device ကို Root မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် အောက်မှ ပုံအတိုင်း Font Changer Lite.apk File ဖွင့်လို့မရပါဘူး။
ပထမ ပုံအတိုင်း Allow လုပ်ပြီးရင် Continue ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယ ပုံအတိုင်း zawgyi_MrThangMing တွေ့ရပါမယ်။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
ပထမပုံ အတိုင်း zawgyi_MrThangMing ကိုဖွင့် ပြီးပေါ်လာသော Box မှ Apply ကို နိုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယပုံ အတိုင်း Reboot Now ကို နိုပ်ပေးလိုက်ပါ။ မိမိ Device Reboot ချပြီးပြန်တက်လာသောအခါ မိမိAndroid OS Device မှာ Myanmar Font မြင်နိုင်/ဖတ်နိုင်ပါပြီး။ Android OS Device အတွက် Myanmar Keyboard ကို လိုရင်တော့ ဒီပို့(စ်)လေးမှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဒါလေးက တတ်သစ်စမင်းသား သီဟထိုက် ထည့်တဲ့နည်း (တိန်တေရော သူ့ကိုသူများ ခိခိ)
ကျွန်တော့်ထည့်တဲ့နည်းက ကြုံသလိုပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ ကျွန်တော်က ဘာမဆိုကိုင်တာပဲ ဘယ်ဖုန်းမြန်မာဖောင့်မရသေးဘူး အော်အေးငါဆီလာခဲ့ ရစေမယ် (တိန်လျေက်ဖောနေတာလာတော့ ဟိုဆောင့်ခိုင်းဒီဆောင့်ခိုင်းနဲ့ အချိန်ကိုပြောပါတယ် ခိခိ..)
ကဲ စပြီ စွာတေးလန်.. နည်းလေး :P :D
အရမ်းလန်းတဲ့myanmar font chanfe.apk
ဘာကြောင့်လန်းသလဲဆိုတာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် ဒီကောင်းလေးက
မြန်မာမူ apkလေးပါ font change တဲ့အခါမှာ
မိမိရဲ့ဖုန်း အမျိုးစားအလိုက် ဘယ်font နဲ့သင့်တော်တယ် ဒါနဲ့ကမရနိုင်ပါဘူး
စသဖြင့်ပေါ့ စာတန်းလေးပေါ်ပြီးပြောပါတယ် ဘယ်font နဲ့မှရနိုင်ပါတယ် မြန်မာစာသွင်းမလား မသွင်းဘူးလား
အစအဆုံးပါဝင်ပါတယ် ကျနော်ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကတော့ကျနော့်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိပါတယ် Imobile.IQ.5.5 Android version 4.2.2ပါ
ဖုန်းကလွယ်မလိုလိုနဲ့နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ဗျ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ သူများဖုန်းတွေမှာ
ဖြစ်နေတာက fbမှာမြန်မာနာမည် ခေါင်းစဉ်ကို
မတွေ့ရဘူး groupရောအတူတူပဲ massage boxမှာပဲနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျ ဒီကိစ္စကို friတစ်ယောက်က ကျနော့်ကိုအကူညီတောင်းတယ် ကျနော်လည်
MPPG က ကိုဖြိုးညီညီရေးတဲ့ Huawei Sony Samsung ၃မျိုးကို မှန်ကန်စွာ မြန်မာစာထည့်ပေးမယ့် 3in1 Font Tool လေးဖြစ်ပါတယ်။ 4.4.2 ထိ Support ရနိုင်ပြီး ဘယ်ဖုန်းကဘယ်ဟာနဲ့ချိန်းရတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် Tool တစ်ခုတည်းကနေ သူဖာသာသူထည့်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. PC နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
မှတ်ချက် ။ ။ ထည့်နည်းများများရှိပါသေးပြီး Fontchanger ကောင်းများလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါက ကျွန်တော်အသုံးများသော နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ပါ အကုန်လုံးမတင်ပြနိုင်တာ နားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်
အမယ်လေးတော် ပိုက်ဆံ ၃၅၀၀၀ ပေးပြီး Mermory ကို ထပ်လိုချင်သူများအတွက် (ဟိဟိစတာနော်;P)
Download PDF စာအုပ်
မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် Mermory Card ရဲ့ပမာဏအတိုင်းထားပစ်လိုက်တာ ဟဲဟဲ အပေါ်ကနည်းအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ..ဒါပေမဲ့နည်းတွေကတော့မျိူးစုံပါပဲ..
photo ရိုက်ပြီး Slightshow လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ..
မင်္ဂလာပါဗျာ Android ဖုန်းတွေမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ဓါတ်ပုံတွေကိုSlideshow ပြုလုပ်ချင်သူတွေ အတွက် Photo Slideshow Maker ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အခုဆိုရင် ဖုန်းတွေကလဲ ကွန်ပျူတာ နီးပါး အသုံးပြုလို့ရပြီးဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အားငယ်လာပါတယ် ဘာတင်ရမှန် မသိလို့လေ ကဲဟုတ်ပါပြီး ဓါတ်ပုံတွေကို Slideshow လုပ်ချင်ရင်တော့အောက်က လိပ်စာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီး File Size (5.7MB) ရှိပါတယ် ကျွန်တော် အသုံးပြုပုံ အနည်းငယ်ကို အောက်မှာ ပုံနှင့် တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်...........
Download>>>>>>>>>>>>>>sharebeast.com (or) Files.com
Add ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် ဓါတ်ပုံထည့်လိုက်ပါ...............
မိမိ Slideshow ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အမှတ်ခြစ်လေး ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Ok ပေါ့...................................
မြားထိုးပြထားတဲ့ ပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်က ပုံအတိုင်း
အစိမ်းတုံးလေး ပြည့်ရင် Ok ပါပြီး...................................................
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ပြီးပါပြီ :P
(ဒီပို့စ်တွေထပ် အရင်မေးထားတဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ် သူတို့ ကျွန်တော်အရင် မတင်ပေးလို့ဒေါသထွက်နေကြမှာအမှန်ပါပဲ နားလည်ပေးပါ မိတ်ဆွေတို့ မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ Earror တွေ သိချင်တာတွေက ပိုရှည်ပြီး ရှာရမှာ အချိန်က အခုပို့စ်တွေထက် ပိုတဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါဗျာ..နောက်ပို့စ်တွေကို ဆက်ကြည့်ပေးပါ နောက်ပို့စ်တွေမှာပါလာပါလိမ့်မယ်..
အဲဒါနဲ့မေ့တော့မလို့ ဖုန်းဘေကဒ် မက်ဆေ့ပို့ပြီးရင် ကဒ်တွေမလွင့်ပစ်နဲ့အုံးနော် အနော်က ချက်ခြင်းမဖြေသေးလို့ပါ တော်ကြာ အခြားလူဖြည့်သွားမှာကြောင့်လို့ ဟိဟိ.. :D